Ghostwriter Dentistry I Waxaan ku soo saareynaa shaqadaada waraaqaha
, 09: 51
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhakhtarka ilkaha
Darajada dhakhtarka ilkaha waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu caansan wuxuuna leeyahay Numerus Clausus. Haddii aadan ku guuleysan Numerus Clausus ee Abitur, waa inaad sugtaa waqti dheer ama aad ka codsataa boos jaamacadda. Darajada dhakhtarka ilkaha waa koorso madaxbanaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo isku dhafan oo leh daraasado caafimaad.
Shahaadada ilkaha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: takhtarka iyo rugta caafimaadka. In semester-ka pre-kiliinikada, cilmiga sayniska iyo aragtida iyo sidoo kale aasaaska farsamada ilkaha ee daaweynta bukaanka la siiyo. Qaybta daaweynta ka hor waxay ku dhammaataa baaritaanka ilkaha ee hordhaca ah, Physikum. Semestarka caafimaadku isla markaaba kuma bilaabayo xiriirka bukaankaaga. Saas ma aha, daaweynta ilkaha waxaa lagu dhaqmaa on moodooyinka phantom. Marka lagu daro daaweynta bukaanka maadooyinka ilkaha sida:
Ilkaha muxaafidka ah,
Dabcan, maadooyinka kale ayaa sidoo kale lagu daray, ha noqoto qaab muxaadaro ama koorso. In yar ayaa lagu xusay:
Nadaafadda iyo microbiology
Iyo maaddo kasta, imtixaannada waa in lagu qoro waxa lagu maqlay iyo waxa lagu bartay lagu hubiyo.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin culeys fara badan iyo waqti yar oo mowduucyada kale ee koorsada ah. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail. Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad codsato mid wicitaan bilaash ah waqti adiga kugu habboon. Waxaan si toos ah u qaadan doonaa Kontakt kula jira oo ku caawiya. Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad si toos ah u dalbato shaqadaada si aan u bilaabi karno qorista shaqadaada isla markiiba. Tan macnaheedu waxa weeye in laguu xilsaari doono maareeye kaas oo la socon doona shaqadaada isla markaana kuu noqon doona xiriir toos ah. Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD oder Qoraal waxaad naga heli kartaa inaan kuu soo qorno.
Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale si dhakhso leh ayaad uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Sidoo kale waa inaad u adeegsataa qoraaga cirfiidka noo ah tayada shahaadadaada ee ku saabsan qoraalkaaga tacliimeed. Kuweena Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu dhammaystiri karaa oo keliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso, waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu kari kartid sayniska sayniska, tusaale ahaan inaad yeelato xirfad awooddo.
Qoraalka cirfiidka ee ilkaha
Qorayaashayaga ghostwriters waxay horeyba u dhameystireen waxbarashadoodii cilmiga ilkaha. Adiga ayaa leh Gudbinta qayb ahaanna wuxuu ku guuleystay baxnaantiisa. Waxay leeyihiin sannado badan oo waayo-aragnimo ah labadaba wax ku ool ah iyo cilmiga-cilmiga ilkaha. Kuma qabsan kartid sannadaha khibradda qoraaladeenna ghost muddo gaaban gudahood. Aynu ku caawinno oo ka faa'iideysanno aqoonta weyn ee ay leeyihiin khabiiradayada. Waad isku halleyn kartaa ikhtiyaarkeenna. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Kuwaaga hada noo soo dir baaritaan!
Ilkaha ee cilmi baarista
Waad saxan tahay qoraaladeena cirfiidka. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Fursadaha shaqada ee leh shahaadada ilkaha
Markaad si guul leh u dhammaysato shahaadadaada dentiistaha, waxaad haysataa fursado kala duwan oo aad ugu gudbin karto aqoontaada. Tusaale ahaan, waxaad ku biiri kartaa tababar takhasus leh dhakhtarka ilkaha - tusaale ahaan a
Dhakhtarka qalliinka afka.
Waxaad sidoo kale sii wadi kartaa inaad ka shaqeyso rugta caafimaadka ee jaamacadda oo aad qaadatid wadada sayniska. Waxa kale oo aad heli kartaa shaqadaada riyada ka dib markaad dhamaysato barashadaada warshadaha ama qaybta dawooyinka. Meelahaas, si guul leh ayaa loo dhammaystiray Gudbinta shuruud aasaasi ah. Xaqiiqdii waad gaari doontaa xorriyaddaada dhaqaale.
Daraasadda dhakhtarka ilkaha iyo cawaaqibka ka dhalan kara
Fadlan la soco in sida ku xusan cilmi baaristii ugu dambeysay, in ka badan 25% ardayda oo dhan horeyba uga cawdeen inay la kulmeen walaac aad u badan ama xitaa daal. Gaar ahaan ardayda dumarka ah ayaa si isa soo taraysa uga cabanaya astaamaha isku buuqsanaanta guud ee walwalka. Ku dhowaad mid ka mid ah shantii gabdhood ee ardayda ah ayaa xitaa laga helay niyad-jab. Cadaadiska lagu doonayo in lagu fuliyo iyo cabsida mustaqbalka ayaa horseeda dalabyo xad dhaaf ah iyo jahwareer.
Hubinta tayada ee ku saabsan berrinka ilkaha